🥇 Inkqubo yokuphicothwa kwezonyango
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 690
Ividiyo yenkqubo yokuphicothwa kwezonyango
Yenza iodolo yenkqubo yobalo-mali
Ngophuhliso lweetekhnoloji zekhompyuter ezintsha, ngakumbi nangakumbi, amayeza afuna inkqubo yobalo-mali eya kudibanisa zonke iimfuno zobalo kumaziko onyango kunye kwiqonga elinye. Inkqubo enjalo yokugcinwa kweerekhodi zonyango inokunceda ekupheliseni ubunzima kumaziko ezempilo kunye nokwenza umsebenzi osemgangathweni kubo bonke abasebenzi. Ngelishwa, zimbalwa kakhulu iinkqubo zogcino mali kwezentengiso zeetekhnoloji zale mihla, ezenza ukuba iinkqubo ezinje ngogcino mali ziphawuleke, kuba zibaluleke kakhulu. Inkampani yethu ingathanda ukukunika inkqubo enjalo yobalo mali, kuba sijolise kwiinkqubo zobalo lwezonyango kwaye sinokusebenzisa naluphina uluvo lonyango. Inkqubo yethu yonyango ibizwa ngokuba yinkqubo ye-USU-Soft. Yinkqubo yobalo-mali edibanisa yonke imisebenzi ekhoyo yeziko lonyango kwaye ikuvumela ukuba uqhube ingxelo kwinqanaba elitsha! Ukusebenza kwenkqubo yobalo-mali ye-USU-Soft ibanzi kakhulu kwaye, ke, ilungele onke amashishini, nokuba sisibhedlele, iklinikhi, igumbi lokuthambisa okanye iofisi ye-ophthalmologist. Kwinkqubo ye-USU-Soft yenkqubo yogcino mali, ungagcina isiseko sedatha yesigulana, ethi yona ilunge kakhulu kwiplinikhi okanye esibhedlele; umsebenzisi ngamnye ungena kwinkqubo yobalo ngokulula nangokukhawuleza. Ukongeza, unokujonga imbali yezonyango, inkqubela phambili yonyango, iingcebiso zoogqirha, njl.
Unokuqhoboshela ii-X-ray kwikhadi lesigulana kunye neziphumo zohlalutyo, zona eziqinisekisa ukwenziwa kwexesha lokusebenza kunye nokugcina indawo yasimahla kwidesktop. Kwinkqubo ye-USU-Soft accounting, ungawuchaza ngokweenkcukacha umsebenzi nesigulana, nokuba ngumqeshwa obenxibelelana naye, njl. Kananjalo ungabala iindleko zamayeza kwinkqubo yobalo, kwaye ubandakanye indleko zawo kwinkonzo, njl.njl. iimpahla, amayeza, izinto ezisetyenziswayo, izixhobo zonyango, kwaye konke oku kuxhomekeke kuluhlu! I-USU-Soft yinkqubo eyodwa yobalo-mali kumaziko onyango kunye nasezibhedlele; iyazenzela iinkqubo zomsebenzi, inyusa ukusebenza ngokukuko kwabasebenzi kunye nokwenza umsebenzi wemihla ngemihla ulunge ngakumbi!
Uvavanyo lwabathengi lubalulekile ukuba ufuna ukwenza iinkonzo zakho zibengcono, njengoko wena, okokuqala, kufuneka wazi ukuba izigulana zicinga ntoni ngawe. Sebenzisa amanqaku okwoneliseka kwabathengi ukukhuthaza abasebenzi bakho. Esi sisiqhelo esihle kakhulu. Kodwa kukho umqobo apha: Abasebenzi banokuthi baqwalasele esi salathisi ukuba sibacalanye ukuba ulwaneliseko lwabathengi luchaphazeleke ziimeko ezingaphaya kolawulo lwabo (umzekelo, umoya ophukileyo wonakele, bekushushu egumbini kwaye umthengi ebengonelisekanga). Kule meko inkqubo yokukhuthaza inesiphumo esichaseneyo. Ukuthintela oku, misela kwangaphambili ulandelelwano olucacileyo lwezenzo zabasebenzi kwimeko yeemeko ezingaqhelekanga (umz. Into eyaphukileyo) kunye nealgorithm ngokubanzi yomsebenzi kwimeko yeemeko ezingekho mgangathweni (umz. Isiguli kufuneka siqhube incoko yomgama omde ngaphezulu I-Skype ngelixa kunikezelwa inkonzo). Le miyalelo inceda abasebenzi bakho ukuba bamshiye umthengi enelisekile kwimeko yeengxaki ezingalindelekanga. Ewe, siphila kwixesha apho uhlala kuphela umahluko phakathi kokunikezelwa kweenkampani ezahlukeneyo ezinokubonwa ngumthengi ngumahluko kumgangatho wenkonzo. Umahluko kwintando yakho uqinisekile ukuba udale ukuthanda kwabathengi ukuba beze kuwe.
Kutheni izigulana zingabuyeli kumbutho wakho wezonyango? Ngamaxesha obunzima awunandlela yimbi ngaphandle kokuba 'usebenze' nesigulana i-100% kwaye ufeze konke okulindeleyo, kuba, kungenjalo, isigulana sinokufumana enye indlela kuwe. Esinye sezizathu zokungabonakali komthengi kuxa umthengi elibele okanye efumene enye indlela. Ukuthintela oku kungenzeki, kuyafuneka ukunciphisa ukubakho komthengi ukuba alibale ngawe. Ukwenza oku, xa uhlawula umthengi, umlawuli kufuneka abuze umthengi ukuba angakhunjuzwa ukuba ayiphinde inkonzo emva kwexesha elithile (umzekelo, kwisiqingatha sonyaka okanye iinyanga ezimbini).
Ngokwenza uluhlu lwabathengi, unciphisa ilahleko, ukhumbuze abathengi ngokuqeshwa kwaye ke unegalelo kwizalathiso zokugcina ezingcono. Ukusebenza kwenkqubo ye-USU-Soft accounting ikuvumela ukuba ubeke abaxhasi kuluhlu lokulinda, ukuze xa kusenziwa ishedyuli yenyanga. Umthengi ufakwa kuluhlu lokulinda kwaye kuya kubakho isaziso ngemfuneko yokukhumbuza umxhasi ukuba abhalise. Abathengi bathanda ukunakekelwa nokunyamekela. Oku kuthetha ukuba ukuba wazi kangangoko malunga nomthengi, kulula ukuba uthethe nabo kwaye ubonise umdla wakho. Ungayenza njani le nto? Kulula oko! Ukuba ugcina amanqaku malunga nomthengi, unawo onke 'amakhadi exilongo' ezandleni zakho! Ukuba ufumanisa ukuba umthengi ukhetha ikofu enekrimu, uyifaka kumanqaku kwaye kwixesha elizayo xa umthengi esiza, umenzela ikofu enekrimu, kwaye uya kuyivuyela le nkathalo kwaye atsalele kuwe. Inkqubo ye-USU-Soft inenqaku lenqaku elenza ukuba ubomi bakho bube lula kakhulu kwaye lukuncede ukuba ufake lonke ulwazi lwabathengi bakho ngendlela eneenkcukacha nangokulandelelana kwayo. Xa ufuna umgangatho, kwaye uzame isicelo sethu sobalo-mali esilungiselelwe ngokukodwa ukwenza iziko lakho libe ngcono!